Inaliti yeplastikhi yokubumba kunye noMatshini wokuFudumeza ubushushu
Inaliti zeplastiki yokubumba nge lokutshisa Ifuna ukufudumeza kwangaphambili komngundo ukuya kubushushu obuphezulu, ukuqinisekisa ukuhamba kakuhle okanye ukuphiliswa kwento ebunjiweyo yenaliti. Iindlela eziqhelekileyo zokufudumeza ezisetyenziswa kolu shishino ngumphunga okanye ubushushu bokufudumeza, kodwa ziyadaka, azisebenzi kakuhle kwaye azithembekanga. Ukufudumeza i-induction yindlela ecocekileyo, ekhawulezayo kunye namandla asebenzayo ethe yasetyenziswa ngokubanzi kule minyaka idlulileyo ukubuyisela umphunga, irhasi okanye ukufudumeza ngokuchaseneyo komngundo kunye nokufa.
Yintoni Inaliti Ukubumbela?
Inaliti yeplastikhi yokubumba ngensimbi yokufudumeza yinkqubo yokunyibilika kweepellets zeplastiki (i-thermosetting / thermoplastic polymers) ezinokuthi zibenako ukubakho ngokwaneleyo, zifakwe kuxinzelelo kwisibumbeko, esigcwalisayo kwaye someleze ukuvelisa imveliso yokugqibela.
Ingaba Plastic Inaliti Ukubumbela Umsebenzi?
Inkqubo yokubumba inaliti yeplastikhi kwiProtolabs yinkqubo esemgangathweni ebandakanya ukungunda kwealuminium. IAluminiyam idlulisela ubushushu ngokufanelekileyo ngakumbi kunentsimbi, ke ayifuni iindlela zokupholisa- oko kuthetha ukuba ixesha esiligcina kupholiso linokusetyenziselwa ukubeka esweni uxinzelelo lokugcwalisa, inkxalabo yezithambiso kunye nokuvelisa icandelo elisemgangathweni.
Iipellets ze-Resin zilayishwa emgqonyeni apho ziya kunyibilika khona, zixinzelelwe, kwaye zifakwe kwinkqubo yembaleki yomngundo. I-resin eshushu idutyulwa kwi-mold cavity ngamasango kwaye inxalenye ibunjiwe. Izikhonkwane ze-ejector ziququzelela ukususwa kwenxalenye ekubumbeni apho iwela khona emgqomeni wokulayisha. Xa ugqatso lugqityiwe, iinxalenye (okanye isampulu yokuqala yokubaleka) zifakwa ebhokisini kwaye zithunyelwa kungekudala emva koko.
Ubushushu bokusetyenziswa kweInduction busetyenziswa njani kwiDies kunye neMolden Industry?
Induction Ukutshisa izixhobo kunye nezibumba zokubumba inaliti yeplastiki
Ukutshisa izixhobo zokubumba zokuphilisa imveliso yerabha kunye namavili emoto
Ukufudumeza ukufudumeza ngokufakwa kwe-catheter kunye nemveliso yezonyango
Ukufa kunye nokufudumeza kweplaten kwistampu yentsimbi kunye nokwenza
Induction Ukutshisa ubunjani bokuphosa kwimizi-mveliso yentsimbi
Induction Ukunyanga ubushushu kunye nokwenza lukhuni kwesitampu kunye nezixhobo zokubetha kunye nokufa
iindidi Ukufudumeza Ukufudumeza kwePDF, Teknoloji tags IH Plastic Inaliti Ukubumbela, ukufakelwa kobushushu ngenaliti, lokungeniswa Inaliti Ukubumbela, induction inaliti yokubumba isifudumezi, Induction Inaliti yeplastikhi yokubumba, Ukucofa isitya, Ukubumba inaliti yeplastiki, Plastic Inaliti Ukubumbela, Plastic Inaliti Ukubumbela wesiFudumezi, Plastic Inaliti Ukubumbela Machine, Plastic Inaliti Ukubumbela System, Yintoni Inaliti Ukubumbela Post yokukhangela